သိပ်လည်းမဝပဲ ဗိုက်ပူ ခါးတုတ်စေတဲ့ အကျင့်ဆိုး (၅) မျိုး ⋆ The Ginger Media
သိပ်လည်းမဝပဲ ဗိုက်ပူ ခါးတုတ်စေတဲ့ အကျင့်ဆိုး (၅) မျိုး
ဝလည်းသိပ်မဝဘဲ ဘာလို့ ဗိုက်ပူခါးတုတ်ကြီး ဖြစ်နေတာလဲ မသိဘူးဆိုပြီး ညည်းညူသံကို စာဖတ်သူတို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကြားဖူးကြမှာပါ။
တချို့ကျပြန်တော့လည်း ဝပေမယ့် ဗိုက်မှာ အဆီသိပ်မရှိတာလည်း မြင်ဖူးကြမှာပါ။ ဗိုက်ပူခါးတုတ်ဖြစ်စေတဲ့ အလေ့အကျင့်ဆိုးတွေကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
၁။ အသင့်စား အစားအစာတွေစားခြင်း ။ ။ ပြုပြင်ထားတဲ့ အသင့်စားအစားအစာတွေကို စားတာဟာ သင့်ကို ဗိုက်ပူခါးတုတ်စေပါတယ်။ အဲဒီအစားအစာတွေမှာ ဆိုဒီယမ်ဓာတ် ပါဝင်လို့ သင့်ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း မကောင်းပါဘူး။ ဒါ့ကြေင့် သဘာဝအသီးအရွက်တွေကိုသာ များများစားပေးပါ။
၂။ အရမ်းမြန်မြန်စားခြင်း ။ ။ အစာကို ကြေကြေညက်ညက်မဝါးဘဲ ခပ်မြန်မြန်စားတာဟာလည်း ဗိုက်မှာ အဆီစုစေပါတယ်။ အစာချေစနစ်အတွက်လည်းမကောင်းလို့ သင့်ကို ဗိုက်ပူစေပါတယ်။
၃။ ကာဘွန်နိတ်ပါတဲ့ အချိုရည်တွေ အများကြီးသောက်ခြင်း ။ ။ ဆိုဒါတွေ၊ ကာဘွန်နိတ်ပါတဲ့ အချိုရည်တွေဟာ အစာချေစနစ်ကို အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အစာအိမ်ကို ရောင်ရမ်းစေပြီး ဗိုက်ပူစေပါတယ်။ ကာဘွန်နိတ်ပါတဲ့ အချိုရည်အစား ရေနဲ့ သဘာဝသစ်သီးဖျော်ရည် သောက်ပါ။
၄။ အိပ်ယာမဝင်ခင် အစာစားခြင်း ။ ။ အိပ်ယာမဝင်ခင် အနည်းဆုံး ၃ နာရီလောက်အလိုမှာ အစာစားသင့်ပါတယ်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖြစ်တဲ့ အစားအစာကိုပဲ ရွေးချယ်စားသုံးသင့်ပါတယ်။ မဟုတ်ရင် သင့်ကို ကိုယ်အလေးချိန် တက်စေနိုင်ပါတယ်။
၅။ အစားမရှောင်ခြင်း ။ ။ သင်ကြိုက်တဲ့ အစားအစာတွေက ဆီကြော်တွေ၊ မုန့်အချိုတွေဖြစ်နေရင် အဲဒီအစားအစာတွေကို ရှောင်ပေးလိုက်ပါ။ တချို့တွေက ပိန်တော့ပိန်ချင်ပေမယ့် အစားမရှောင်ကြပါဘူး။ သင့်အတွက် မကောင်းဘူးဆိုရင် ရှောင်လိုက်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
အရေးကြီးဆုံးက သင့်အစားအစာကို အာဟာရဓာတ် ညီညွတ်မျှတအောင် စားပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။ ရေများများသောက်ပါ။ စိတ်ဖိစီးမှုကို လျှော့ချပါ။ တက်တက်ကြွကြွ နေပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ ဗိုက်ချပ်ချပ်လေးကို မလွဲမသွေ ပိုင်ဆိုင်ရရှိစေမှာပါ။
ဝလညျးသိပျမဝဘဲ ဘာလို့ ဗိုကျပူခါးတုတျကွီး ဖွဈနတောလဲ မသိဘူးဆိုပွီး ညညျးညူသံကို စာဖတျသူတို့ ပတျဝနျးကငျြမှာ ကွားဖူးကွမှာပါ။
တခြို့ကပြွနျတော့လညျး ဝပမေယျ့ ဗိုကျမှာ အဆီသိပျမရှိတာလညျး မွငျဖူးကွမှာပါ။ ဗိုကျပူခါးတုတျဖွဈစတေဲ့ အလအေ့ကငျြ့ဆိုးတှကေို မြှဝပေေးခငျြပါတယျ။
၁။ အသငျ့စား အစားအစာတှစေားခွငျး ။ ။ ပွုပွငျထားတဲ့ အသငျ့စားအစားအစာတှကေို စားတာဟာ သငျ့ကို ဗိုကျပူခါးတုတျစပေါတယျ။ အဲဒီအစားအစာတှမှော ဆိုဒီယမျဓာတျ ပါဝငျလို့ သငျ့ကနျြးမာရေးအတှကျလညျး မကောငျးပါဘူး။ ဒါ့ကွငျေ့ သဘာဝအသီးအရှကျတှကေိုသာ မြားမြားစားပေးပါ။
၂။ အရမျးမွနျမွနျစားခွငျး ။ ။ အစာကို ကွကွေညေကျညကျမဝါးဘဲ ခပျမွနျမွနျစားတာဟာလညျး ဗိုကျမှာ အဆီစုစပေါတယျ။ အစာခစြေနဈအတှကျလညျးမကောငျးလို့ သငျ့ကို ဗိုကျပူစပေါတယျ။
၃။ ကာဘှနျနိတျပါတဲ့ အခြိုရညျတှေ အမြားကွီးသောကျခွငျး ။ ။ ဆိုဒါတှေ၊ ကာဘှနျနိတျပါတဲ့ အခြိုရညျတှဟော အစာခစြေနဈကို အနှောငျ့အယှကျ ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။ အစာအိမျကို ရောငျရမျးစပွေီး ဗိုကျပူစပေါတယျ။ ကာဘှနျနိတျပါတဲ့ အခြိုရညျအစား ရနေဲ့ သဘာဝသဈသီးဖြျောရညျ သောကျပါ။
၄။ အိပျယာမဝငျခငျ အစာစားခွငျး ။ ။ အိပျယာမဝငျခငျ အနညျးဆုံး ၃ နာရီလောကျအလိုမှာ အစာစားသငျ့ပါတယျ။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖွဈတဲ့ အစားအစာကိုပဲ ရှေးခယျြစားသုံးသငျ့ပါတယျ။ မဟုတျရငျ သငျ့ကို ကိုယျအလေးခြိနျ တကျစနေိုငျပါတယျ။
၅။ အစားမရှောငျခွငျး ။ ။ သငျကွိုကျတဲ့ အစားအစာတှကေ ဆီကွျောတှေ၊ မုနျ့အခြိုတှဖွေဈနရေငျ အဲဒီအစားအစာတှကေို ရှောငျပေးလိုကျပါ။ တခြို့တှကေ ပိနျတော့ပိနျခငျြပမေယျ့ အစားမရှောငျကွပါဘူး။ သငျ့အတှကျ မကောငျးဘူးဆိုရငျ ရှောငျလိုကျတာ အကောငျးဆုံးပါပဲ။
အရေးကွီးဆုံးက သငျ့အစားအစာကို အာဟာရဓာတျ ညီညှတျမြှတအောငျ စားပါ။ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျပါ။ ရမြေားမြားသောကျပါ။ စိတျဖိစီးမှုကို လြှော့ခပြါ။ တကျတကျကွှကွှ နပေါ။ ဒါဆိုရငျတော့ ဗိုကျခပျြခပျြလေးကို မလှဲမသှေ ပိုငျဆိုငျရရှိစမှောပါ။
ပရိတ်တရားတော်ကို ရဟန်းများက ရွတ်ဆိုနေတဲ့အခါမှာ လူအများ လိုက်ရွတ် သင့်/ မသင့်
သတ္တုစ၊ ဆူး၊ သစ်သားစ၊ ဖန်ကွဲစတွေ စူးတဲ့အခါ နာကျင်မှု မရှိပဲ ဖယ်ရှားနိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးများ
သင်တို့ ကံညံ့နေပြီးဆို ကြုံရမယ့် အချက် ၅ ချ က်
လူတိုင်းမသိသေးတဲ့ အိပ်မက် ရဲ့နောက်ကွယ်က စိတ်ဝင်စားဖွယ် အမှန်တရားများ
လှူထားပြီးတဲ့သင်္ကန်းတွေကို ဘုန်းကြီးဆီက ပြန်ဝယ်ပြီးလှူတာ ကုသိုလ်ရပါသလား? ငရဲကြီးပါသလား?
သင်ပျောက်သွားတဲ့ ဖုန်း ကို ကောက်ရသူက ကတ်လဲသုံးနေရင်တောင် ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတာ သိနိုင်ပါပြီ …
နိုးနိုးခြင်း အိပ်ယာထဲကချက်ချင်းမထချင်တာဟာ ဥာဏ်ရည်မြင့်မားတဲ့လက္ခဏာတစ်ရပ်သာဖြစ်
တစ်နှစ်တစ်ခါ တောင်ကိုရီးယားမှာ ကျင်းပတဲ့ ဘိုယောင်းရွှံပက်ပွဲတော်
TheGingerMedia · Posted on July 13, 2019